Mogadishu Journal » Mido ayaa Dhaleeceeyn usoo jeediyay Salah ka kaqeyb galkii arooska walaalkiis
Kadib markii laga helay COVID-19 waxyar kadib markuu kaqeyb galay aroos, Mohamed Salah ayaa soo jiitay dhaleeceyn baahsan.
Mohamed Salah ayaa si xun u dhaleeceeyay weeraryahankii hore ee Masar Mido, kaasoo ku dhaleeceeyay xiddiga Liverpool qandaraaskiisa COVID-19 wuxuuna maamulka xulka ku tilmaamay "fulayaal" caawinta dayaca ciyaaryahanka ee muuqda.
Jimcihii la soo dhaafay ayaa la xaqiijiyay in Saalax laga helay viruska ka dib markii uu soo celiyay labo natiijo oo wanaagsan oo laga helay.
Markii dambe waxaa soo ifbaxay in Saalax uu ka qeybgalay meherka walaalkiis oo ka dhacay Qaahira horraantii toddobaadkan, dhacdadaas oo la sheegay inay ku martigaliyeen boqolaal qof.
Inkasta oo qaar ka mid ah muuqaallada laga soo duubay arooska ay muujinayeen in Saalax uu ku dhex cayaarayo dad fara badan oo wejiga duuban, kuwo kalena daboolka ayaa muujinaya in qoortiisa ay u egtahay - sida adduunka intiisa badan, Masar ayaa ku soo rogtay borotokoollada COVID-19 si loo xakameeyo faafitaanka fayraska , oo ay ku jiraan tallaabooyinka kala fogeynta bulshada iyo xiridda waji-furka ee meelaha dadweynaha ku lifaaqan.
Lama xaqiijin in Saalax uu ku dhacay viruska arooska, laakiin wuxuu soo jiitay cambaareyn balaaran oo ku saabsan ka soo qeyb galkiisa intii lagu jiray faafida iyo inuu aad ugu dhow yahay isreebreebka Koobka Qaramada Afrika ee Togo.
Haatan Mido, oo ah shaqsi muran badan dhaliyay qudhiisa maalmihiisii ​​uu ciyaarayay, ayaa canbaareeyay Salah iyo Xiriirka Kubadda Cagta Masar (EFA) - oo uu ku jiro saaxiibkiisii ​​hore Mohamed Barakat, oo hadda ah agaasimaha xulka - isagoo u oggolaaday in xaaladdu ay soo ifbaxdo markii hore.
Weeraryahankii hore ee kooxaha Tottenham, Ajax iyo Roma ayaa yidhi: "Waan ogahay in weerar la igu qaadi karo ka dib hadalkayga dambe, laakiin waa inay noqotaa. Mohamed Salah wuxuu sameeyay qalad weyn markii uu ka qayb galay arooskii walaalkiis dhawr maalmood ka hor ciyaartii xulka qaranka Masar." TV-ga Al-Nahar. Wuxuu muujiyay dayacaad weyn talaabooyinka loo qaaday si looga hortago coronavirus, natiijaduna waxay noqotay inuu qaaday cudurka.
Dayaca Maxamed Saalax wuxuu sababay in kooxda Masar ay weydo xidig muhiim ah ciyaar iyo waqti aad muhiim u ah, sidoo kale wuxuu qatar galiyay caafimaadka asxaabtiisa kooxda, ma ahayn inuu goobjoog ka ahaado arooska walaalkiis, gaar ahaan waqtigaas. .
“Qodobka kale ee halkan ku yaal waa aamusnaanta dhamaan kuwa mas'uulka ka ah dayaca ciyaartoyga, taas oo xaqiijinaysa xaqiiqda ah in ciyaartoygu wali ka weyn yahay xulka qaranka taasna waxay u horseedi doontaa guuldaro weyn.
“Markii aan seegay koobkii qaramada Afrika ee 2006, waxaa la igu ciqaabay inaan seego finalka oo laga reebo xulka qaranka muddo lix bilood ah, xitaa haddii aan ciyaaro [heer naadi].
Finalka aan qasaarnay, waxaan ahaa dhalinyaro waxaanan moodayay inaan ka weynaa kooxda, laakiin waxaan xaqiijinayaa hada inaysan jirin cid ka weyn kooxda, hadii qof uu sidan u fikiro, tani waxay noqon doontaa guul daro weyn.
Saraakiisha Masar wax eray ah oo eedeyn ah ama canaan ah uma aysan jeedin Maxamed Saalax iyo dhibaatada ka dhalatey dayacaadkiisa xulka Masar, waxaana u magacaabayaa wasiir kasta oo ka tirsan isboortiga Ashraf Sobhi, gudoomiyaha EFA Amr Al-Ganayni. tababaraha xulka Hossam Al-Badri, iyo agaasimaha kooxda qaranka Mohamed Barakat, dhamaantood waa fulayaal waxayna ka baqayaan taageerayaasha Mohamed Salah ee jecel xiddiga Liverpool.
"Laakiin halkan waxaan ku hadlayaa aniga oo aan xisaabayn ama aan cidna ka baqaynin. Qofna ma odhan karo Saalax khalad ma samayn isaga oo aaday arooskii walaalkiis wakhtigaas adag iyo iyada oo la tixgelinayo dhibaatada coronavirus.
Dhamaan wargeysyada Ingriiska si xun ayay nooga hadlaan, Salah waxay ahayd in lagu canaanto wixii uu sameeyay, laakiin qof walba wuxuu dareemayaa cabsi. ”
Saalax ayaa sidoo kale u muuqda mid seegi doona kulanka Liverpool iyo Leicester City ee Premier League.